ဘာကြောင့် ပြည့်စုံခြင်းက လုံလောက်မှုကို မဖြစ်စေတာလဲ? ရောင့်ရဲမှုကို ဘယ်လိုရှာဖွေကြမလဲ?
သင်ဟာ အရာရာတိုင်းအတွက် ”အဆင်သင့်ပါပဲ” ဆိုတဲ့ လူမျိုးလား? အသေးအဖွဲအလုပ်လေးတွေကအစ စိတ်နှစ်ပြီး ပြီးပြည့်စုံအောင် လုပ်တတ်သူမျိုးလား? ဒါ့အပြင် စိတ်ကျန်းမာရေးရော၊ ရုပ်ကျန်းမာရေးအတွက်ပါ မောပန်းနေရသူမျိုးလား? ဒီမေးခွန်းမှာ သင့်အဖြေက ‘Yes’ လို့ဖြေတယ်ဆိုရင် သင်ဟာ ပြည့်စုံသူတစ်ဦးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့တွေဟာ နေ့စဉ်စကားဝိုင်းတွေမှာ ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့ စကားလုံးက နေ့စဉ်မပါမဖြစ် ပါဝင်ပါတယ်။ ”ပြည့်စုံတဲ့ ရုပ်ရည်မျိုးလိုချင်လိုက်တာ” ”ငါက အဖက်ဖက်က ပြည့်စုံနေတဲ့ RS မျိုးရရင် ဘယ်လောက်များကောင်းလိုက်မလဲ” ဒါမှမဟုတ် ”လစာကောင်းကောင်းလေးနဲ့ အလုပ်မျိုးလေးရရင် ဘယ်လောက်များကောင်းလိုက်မလဲ” ပေါ့။ လူတိုင်းက ပြည့်စုံချင်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြည့်စုံသူတွေလို့ သတ်မှတ်တတ်သူတွေကလည်း နေရာတိုင်းမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်လိုကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့် မြင့်မားတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကို မပြည့်မှီနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်း သူတို့ကိုယ်သူတို့ မကျေနပ်ဖြစ်ပြီး စိတ်ပျက်မိကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးမျာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တန်ဖိုးထားမှုနှင့် မိမိကိုယ်ကိုယ်တန်ဖိုးထားမှုကို အပျက်သဘောသက်ရောက်စေပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ရောင့်ရဲနိုင်သူတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။
ပြည့်စုံခြင်းက အပေါ်ယံအားဖြင့် ကောင်းမွန်တယ်ဆိုပေမယ့် ၎င်းအတွက် ကြိုးပမ်းခြင်းတွေကို အာရုံမစိုက်မိတော့ဘဲ ရလဒ်တွေကြောင့် စိတ်ပျက်ရခြင်းက ပျက်စီးခြင်းကို ဦးတည်နေပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ မြောက်များစွာကိုလည်း ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဒီလိုပြည့်စုံပြီး ဖိစီးမှုတွေမဖြစ်စေဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တန်ဖိုးထားမှုတွေကို စစ်ထုတ်ပြီး ဘဝမှာ နေပျော်ဖို့ ဘယ်လိုကြိုးစားကြမလဲ?
၁။ ကိုယ့်ရဲ့ ပိုကြီးတဲ့ ရှုထောင့်ကို ဂရုစိုက်ပါ
ပြည့်စုံခြင်းရောဂါရှိခြင်းက အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာကလွဲပြီး ဘယ်လိုရှုံးနိမ့်တဲ့အခြေအနေတွေကို လက်မခံနိုင်သူတွေပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ငါတကယ် အချိန်နဲ့အမျှ ကြိုးစားခဲ့ရဲ့လား? တကယ်ကို တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာကို လုပ်နေခဲ့တာလား? ငါတစ်ခြားအရေးကြီးတဲ့အရာတွေကို မေ့ထားခဲ့မိသလား? တစ်ခြားအရေးကြီးအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည့်စုံဖို့ ကြိုးစားနေတာကို လျှော့လိုက်ပြီး အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကို ဂရုစိုက်ဖို့ / မြတ်နိုးဖို့ သင်ယူပါ။ ခုချိန်ကစပြီး စတင်စဉ်းစားကြည့်ပါတော့။
၂။ တစ်ခြားလူတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်နေတာတွေကို ရပ်လိုက်ပါ
ဒီအချက်က ဘဝနေထိုင်နည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ၁၀ ပုဒ်လောက်မှာ ၈ ပုဒ်အထိပါဝင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူ့ဘဝမှာ ရှင်သန်ရတာက တစ်ခြားလူတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နေမယ်ဆိုရင် ဘဝဟာ ရှေ့တိုးဖို့ထက် ဆိုးကျိုးတွေပဲ ပိုများနိုင်တာကြောင့်ပါ။ လူတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်ဘာလုပ်နေမိတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုပဲ ဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ သင့်ရှေ့မှာ တစ်ယောက်ယောက်ကတော့ အမြဲရှိနေပါလိမ့်မယ်။ သင့်အတွက် စိတ်သောကရောက်ရတာပဲ အဖတ်တင်ပါလိမ့်မယ်။ အရင်က သင်နှင့် လက်ရှိသင်ကိုပဲ နှိုင်းယှဉ်ပါ။
၃။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကြင်နာပါ
အမှားတွေဟာ ဘဝရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၊ ကျရှုံးခြင်းမှာ တစ်ချိန်လုံးသောကရောက်မနေဘဲ ၎င်းကနေ သင်ယူပါ။ ဘာတွေပဲ မှားယွင်းနေပါစေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်”ဒီအရာက အဆင်ပြေသွားမှာပါ၊ နောက်တစ်ခါကျ ပိုကောင်းအောင် ကြိုးစားကြည့်မယ်” လို့ပြောပါ။ အမြဲတမ်းတော့ မှန်မနေနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်ချက်တွေကို လက်ခံပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဝေဖန်နေတာထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အပြုသဘောဆောင်တဲ့စကားလေးတွေ ပြောပေးပါ။
၄။ ဂျာနယ်ရေးခြင်းကို ပုံမှန်ပြုလုပ်ပါ
ဂျာနယ်ပုံမှန်ရေးတာက ရေးနေချိန်မှာ ပျင်းဖို့ကောင်းနိုင်ပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ Note Book ကို ပြန်ကြည့်ရတဲ့ ခံစားချက်တွေကို ခံစားဖူးသူတိုင်း ကောင်းကောင်းနားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဂျာနယ်ရေးရခြင်းအတွက် တစ်ခြားတိုးတက်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေလည်း အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ဂျာနယ်တွေကိုကြည့်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ်အခြေအနေကို ပိုပြီးတိုးတက်လာစေဖို့ ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေ၊ ပညာရေးတိုးတက်မှုအခြေအနေ၊ ကျန်းမာရေးအတွက် အားထုတ်မှုတစ်ချို့ကို ထည့်ရေးနိုင်ပါတယ်။
၅။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကုသပါ
ပြည့်စုံခြင်းကို ရှာဖွေရင်း စိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါ သင်ကိုယ်တိုင်အတွက် ကောင်းသောအရာတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ ကြိုးစားပါ။ အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ စာအုပ်ဖတ်နိုင်ရင် ဖတ်ပါ (သို့) လမ်းလျှောက်ပါ။ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ စကားပြောဖို့ ကြိုးစားပါ။ သီချင်းအကျယ်ကြီးဖွင့်ပြီး ကပါ။